Steel makarakara, Steel lalana mivily makarakara, Marina Mandeha Steel makarakara - Jiulong
Noforonina makarakara Panel
Fanaratsiana & Stanchion
Special makarakara Panel
Stock makarakara Panel
Professional makarakara mpamatsy vahaolana. Top makarakara mpanamboatra ao Shina.
Manome isan-karazany ny Products
Tongasoa eto ny orinasa
Ningbo Jiulong milina Manufacturing Co., Ltd (NJMM)
dia iray amin'ireo mpitarika mpanamboatra manokana amin'ny famokarana gazety-welded vy makarakara ao Shina. Miorina ao amin'ny tanàna seranan-tsambo malaza -Ningbo.
Manana mety ny fifamoivoizana sy ny ambony toerana ihany 30 minitra fiara ho any Ningbo Lishe International Airport ihany 25 minitra fiara ho any Ningbo Port-malaza iraisam-pirenena ranomasina seranan-tsambo miaraka ny tombony azo amin'ny tsy silting, lalina-rano sy ny ranomandry-maimaim-poana ny taona manodidina.
hanamafy orina ny welder fampiofanana mpandraharaha T ...
Adiresy: Jiulong Lake Industrial Zone, Zhenhai District, Ning Bo City, Zhejiang
Nanontany ny teny nindramina